ဟာသ – santhit.com
😃😃😃အိမ်သာထဲက ဒဿ နများ😜😜😜ရီရလို့ သူများဆီကခိုးလာတာ😝😝😝
😃😃😃အိမ်သာထဲက ဒဿ နများ😜😜😜 ရီရလို့ သူများဆီကခိုးလာတာ😝😝😝😝😝 *********************** * အိမ်သာထဲဝင်တိုင်း အီအီး ပါတယ်လို့ မထင်နဲ့ ရင်ဘတ်ထဲဝင်တိုင်းလည်း အချစ်လို့ မထင်နဲ့ * *ဘာလဲ – အချစ် ? ပေါက်လိုက်တဲ့ အီး ကတောင် သစ္စာပိုရှိတယ် ဘယ်မှ ထွက်မသွားခင် ကိုယ့်နှာခေါင်းကို အရင် လာနှုတ်ဆက်သေးတယ်* *အစာဟောင်းလည်း ဗိုက်ထဲ မထားနဲ့ အဆက်ဟောင်းလည်း ရင်ထဲ မထားနဲ့* *ဘူခနဲမြည်တိုင်း နံတယ် မထင်နဲ့ အသံမမြည်ပဲလည်း နံဟောင်နေတတ်တယ် ဖွင့်ပြောမှ…
Khant Hein March 11, 2018 ဟာသ No Comments
ဖုန်းအသုံးပြုရာကနေပြီးတော့ တစ်ရွာလုံးကပ်ရောဂါဆိုးကြုံတွေ့ 
Khant Hein January 14, 2018 ဟာသ No Comments
ရန်ကုန်မှာ မနေ့ညကလှုပ်သွားတဲ့ ငလျင် မြေကြီးထဲက အသံတွေပါကြားရ
ရန်ကုန်မှာ မနေ့ညကလှုပ်သွားတဲ့ ငလျင် မြေကြီးထဲက အသံတွေပါကြားရ ငလျင်လှုပ်တာ မြေကြီးထဲက အသံတွေပါကြားရ… ငလျင်​လှုပ်​သွားသည်​….။ သူတို့ဤသို့Facebook ပေါ်တင်ကြသည်။ (ပုံမှန်​ လူ) ဟ.. ငလျင်​လှုပ်​သွားတယ်​ဟ…….! (Like လိုချင်သူ) ငလျင်​လှုပ်​သွားတယ်​ရော…. ဘယ်​တူ​တေ သိလိုက်​လဲဟင်​..သိသိမတိတိ… တို့ကို ခင်​ရင်​ Like​လေး​ပေးခဲ့ (Comment တောင်းသူ) … ငလျင်​လှုပ်​သွားတာ…​ခေါင်း​တေမူး​နေလို့.! အိုင့်ကို သနားရင်ဖိုက်တင်းလို့ပြောသွားကြ (အီစီကလီလုပ်သူ)… ငလျင်​လှုပ်​တုန်းက စမီး ​ချော်​လဲသွားတယ်​…။ မီးကိုချစ်သေးရင်… အုံဖွလုပ်ပေးသွားကြ အူး…
‘ချစ် ချွတ်ကွာကြည့်ချင်လို့” “ကိုကိုကလဲ”
”ချစ် ချွတ်ကွာကြည့်ချင်လို့” “ကိုကိုကလဲ” ”တခါထဲပါကွာ နော်ချစ်” “မချွတ်ချင်ပါဘူး” ”ချစ်မချွတ်ရင် ကိုကိုဆွဲချွတ်လိုက်ရမလာ့း့ပြော” “မလုပ်ပါနဲ့့ရှက်စရာကြီးကို” “လူတွေကြည့်ရင် ချစ်ရှက်တယ့့်” ”မရှက်ပါနဲ့ ကိုကိုနဲ့ချစ်နှစ်ယောက်ထဲရှိတာ ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလေကွာ ” “ဟွန်းးးးကိုကိုတခါထဲနော်” ”အင်” “တကယ်နော့့်” ”၁ဂယ် ၂ဂယ် ၃ဂယ်ကွာ ” “အင့့့်ကြည့်” ”ဟာ” “ဘာဖြစ်လို့လဲ ရှက်ပါတယ်ဆို” ”ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးချစ်ကလဲ ချစ်စရာလေး” …
Khant Hein January 3, 2018 January 3, 2018 ဟာသ No Comments
အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုိးသမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်… သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင်ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ ထူးဆန်းနေတာပေ့ါ…. ဒါနဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူးတယ်… …. “အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲဆိုတော့ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပါရစေ” “ဒီလိုပါ… ပထမယူတဲ့ အမျိုးသားက သွေးတိုးရောဂါရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဦင်္းညမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်လွန်ပြီး မူးလိုက်တာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီး သေပါလေရော” “အော်…. ဒုတိယအိမ်ထောင်ကျတော့ရော…” “ဒုတိယယူတဲ့ စစ်ဗိုလ်လေးက မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ပဲ ရှေ့တန်းထွက်သွားတာ၊ ပြန်မလာတော့ဘူးလေ” “အော်… နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ရော……
Khant Hein December 28, 2017 ဟာသ No Comments
ယောင်္ကျားတယောက် 2087 ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်သောအခါ ============= “ဟယ်​…လူနာသတိရလာပြီ… ဖြည်းဖြည်း ဖြည်းဖြည်းထ​နော်​ ရှင့်​ဒဏ်​ရာ​တွေက များတယ်​” “အား ကျွတ်​ကျွတ်​ကျွတ်​…ကျွန်​​တော်​ ဘယ်​​ရောက်​​နေတာလဲဟင်​” “ရှင်​…​​ဆေးရုံ​ရောက်​​နေတာပါ” အသံချိုချို​လေး ကြား​နေရ​ပေမယ့်​ မျက်​လုံးက ရုတ်​တရက်​မဖွင့်​နိုင်​….. တဖြည်းဖြည်းချင်း အားယူပြီး ဖွင့်​ကြည့်​​တော့ ​ ချော​မော​ပြေပြစ်​​သော မျက်​နှာ​လေးတစ်​ခု ​ သေချာ​ ထပ်​ပြီးကြည့်​လိုက်​​တော့ ကိုယ့်​မျက်​လုံးကိုယ်​ မယုံနိုင်​​အောင်​​ဖြစ်​သွားသည်​….. “ဟဲ့…မြတ်​စွာဘုရား” ဖြူလွှ​သော ဂျူတီကုတ်​​အောက်​တွင်​ ​ ဘော်​လီနှင့်​အတွင်းခံသာ ဝတ်​ထား​သော ​ဒေါက်​တာမ​လေး ကျုပ်​ကြည့်​​နေတာ​တောင်​ ရှက်​သည့်​ပုံမ​ပေါ် ကျုပ်​ကို…
Khant Hein December 26, 2017 ဟာသ No Comments
အိစက်မို့ဖောင်းနေသော သူ၏ အပေါ်ယံသားလေးတွေကို ကျွန်တော့် လက် ၅ ချောင်းနဲ့ ဆုပ်နယ်လိုက်ပြီး
အိစက်မို့ဖောင်းနေသော သူ၏ အပေါ်ယံသားလေးတွေကို ကျွန်တော့် လက် ၅ ချောင်းနဲ့ ဆုပ်နယ်လိုက်ပြီး ဖင်လေးကို အားရ ပါးရ ရိုက်ပုတ်လိုက်သည်။ သူ၏ အောက်ခံလေးကို ဖြည်းညင်းစွာ ခွာချရင်း ကျွန်တော့် မျက်လုံးထဲမှာ လိုချင် တက်မက်မှု အရိပ်အယောင်တွေ အထင်းသား မြင်နေရပါပြီကော။ ကြာရှည်စွာ မအောင့်အီးနိုင်တော့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရမ္မက်တွေအရ သူ့ရဲ့ ဖင်လေးကို ခပ်ဖွဖွလေး ဆွဲဖြဲနေမိပြီ။ မထင်မှတ်တဲ့ အလိုမကျမှုတစ်ခုက မဖိတ်ခေါ်ဘဲ ရောက်ရှိခဲ့၏။ သူ့ဖင်ထဲက ထွက်လာသည့် အရာကားးးးး ညိုဝါရောင် အနှစ်များပင်ဖြစ်တော့လေသတည်း။…
🙀ငရဲပြည် ကတောင် လက်မခံရဲတဲ့ ဆရာမ🙀 🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭🎭 “ဟဲ့ မောင်မင်းတို”့ “ငရဲပြည် တံခါးဝ အလှည့်ကျလာတာက ဘယ်သူတုန်းဟဲ့” “မှန်လှပါအရှင် ” “ငရဲပြည် တံခါးဝ အလှည့်ကျလာသူက အဖြူအစိမ်း ဝတ်လို့ လူ့ပြည် မှာ ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်ခဲ့သူပါ ဘုရား” “ဟေ” “ကျောင်းဆရာမဆိုတာ ရပ်ကျိုးရွာကျိုးလွန်သယ်ပိုးပြီး လူကြီး မိဘ ရိုသေလှတဲ့သူက အဘယ်နည်းနဲ့ ငရဲပြည် ဆင်းလာရသနည်း….. ” “စစ်မေးတော်မူကြစမ်းလဟယ် ” ” မှန်လှပါ” “ကဲအမိ…
Khant Hein December 25, 2017 ဟာသ No Comments
အရှင်ရုက္ခစိုးမင်း၊ ညဘက်အိပ်မပျော်တဲ့ ကျွန်တော့်ကိုအိပ်ပျော်စေတဲ့ ဆေးတစ်ခွက်လောက် ပေးသနားတော်မူပါခင်ဗျာ”
အရက်သမားနှင့် ရုက္ခစိုး || ဟာသ || “အရှင်ရုက္ခစိုးမင်း၊ ညဘက်အိပ်မပျော်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို အိပ်ပျော်စေတဲ့ ဆေးတစ်ခွက်လောက် ပေးသနားတော်မူပါခင်ဗျာ” “ရော့အင့် ဟေ့ကောင်” “ခင်ညာ၊ ဟာ ရုက္ခစိုးမင်းကြီး၊ ဂွတ် ဂလု ဂလု” “အားပါး၊ အရှင်ရုက္ခစိုးမင်းတိုက်တဲ့ဆေးက အရက်အတိုင်းပဲဗျ၊ အရက်မှ ကျွန်တော်သောက်နေကျ ဂလင်းဝီစကီ နဲ့ တော်တော်တူတယ် အေ့” “တူဆို ဂလင်း အစစ်ပဲလေ၊ ငါလည်း အိပ်ပျော် စားဝင်အောင် ဒါပဲချတယ်” “ခင်ဗျာ၊ ရုက္ခစိုးမှာလည်း အိပ်မပျော်ဘူး ဆိုတာမျိုးရှိတာလား၊ ကျွန်တော်…
သတိ​လေး​တော့ထားကြပါဗျာ ၈ နှစ်သား အရွယ်ကလေးကြောင့် အဝတ်လျှော်တဲ့ ‘…မ..’ဗိုက်ကြီးသည့်ဖြစ်ရပ်.. “တောက်…! ကစားစရာရှားလို့ကွာ…ခုတော့မိအေးဗိုက်ကြီးပြီ ”“((ရွှမ်း)) ((ရွှမ်း))” “ဟင် မှတ်ပြီလား နောက်အဲ့လိုယုတ်မာအုံးမလား အင်းကွာ အင်းကွာ” “ဟီးး အောင်မလေး ကြောက်ပါပြီ ဖေဖေရဲ့နောက် သားမလုပ်တော့ပါဘူး ဟီးးအီးး” ဘာ!!နောက်မလုပ်တော့ဘူး ဟုတ်သလား နောက်လုပ်လို့လဲမရတော့ဘူးကွ အတတ်ဆန်းတွေတတ်နေတယ်ဟုတ်လား ဟေ အင်းကွာ အင်းကွာ” “ဟီးးအင့်…သားနာလှပါပြီ သားကို မရိုက်ပါနဲ့တော့ဖေဖေရယ်…ဟီးးးအိ” (အဲ့ချိန်မှာ တစ်အိမ်ကျော်မှာနေသော ကိုသာဒိုး ရောက်ရှိလာပြီး) “ဟာ…ကိုဖိုးစီ ခင်ဗျား ဗျာ ကလေးကိုမညှာမတာဘာလို့အဲ့လောက်ရိုက်နေရတာတုန်း အချိုးရာ…